Ukuze uthole ukwaziswa mayelana nendlela ikhule turnips, okhokho bethu bazi eminyaka ambalwa adlule. Phela, isitshalo yemifino kwaziwe abantu izinkulungwane zeminyaka lemine. Kakade ngaleso sikhathi abantu hhayi kuphela owayazi ukuthi zikhule turnips, kodwa futhi basebenzisa yona njengesibonelo omunye ukudla okuyisisekelo. Nokho, nge obhekwe ukubaluleka kwalesi impande kwezitshalo amazambane zehlele. ERussia ke kwalethwa ekhulwini weshumi nane waseGrisi.
Eningini lethu, lokhu zemifino lihlotshaniswa isicaba impande kwezitshalo of elidala Russian inganekwane. It has a segolide umbala ophuzi kanye eqinile bushelelezi. Lolu hlobo ingenye ezivame kakhulu ezweni lethu. Abantu babembiza ngokuthi "the Wax." Abalimi ayibalulekile nje ukwazi ukuthi sikhule turnips endle. Kubaluleke ngokufanayo ukukhetha ibanga elifanele.
Ezweni lethu likhula, akuzona zonke izinhlobo yaleli kwezitshalo impande. Thina turnips ngokuvamile esekhulile wathola abalimi Russian. Lolu hlobo lokuthonya Petrovsky. Nakuba izingxenye ezithile engadini likhula kahle futhi geisha Japanese. Ngaphandle kwalezi izinhlobo ezimbili ezinconywe Register State, ezweni lethu umusa njengoba lezi zinhlobo ezilandelayo - May zelenogolovuyu ophuzi, white fioletovogolovuyu Milanese, Golden Ball, Snow White nabanye.
Imibandela elikhulu turnips ezikhulayo
Lokhu yemifino impande kuyinto izitshalo ukukhanya-onothando. Labo abathanda indlela yokutshala turnips, kufanele wazi ukuthi isitshalo kudinga kosuku olude. ukukhanyisa Good - omunye timo letisisekelo ukuthuthukiswa yayo evamile. Lokho-ke enza ukuthi impande izitshalo zanqwabelana Vitamin ewusizo ngakho C. Futhi labo bazi kahle indlela yokutshala turnips, siyaqiniseka ukuthi izimfuno anda isiko okukhanyisa presents ngokuyinhloko ngesikhathi sokuqala sokukhula.
Amazinga elikhulu for ukutshala kanye nokukhula impande igebe ivela degrees nanhlanu kuya amabili. Labo abathanda indlela yokutshala turnips endle, kumelwe wazi ukuthi imodi ephansi kungase kubangele ukuthuthukiswa amasentimitha ngonyaka. Ukuze nokukhula okuvamile simila kuyadingeka futhi esanele inhlabathi umswakama nomoya. Ikakhulukazi afune izinto ngenkani kwabanye isiko enhlabathini ngesikhathi ukuhluma futhi ngesikhathi kumiswa amahlamvu. Ochwepheshe abazi indlela yokutshala turnips endle, bakholelwa ukuthi ukuthambisa esifike ngesikhathi ngalesi sikhathi kuye kwaba nomphumela omuhle hhayi kuphela isivuno, kodwa ukunambitheka.
Turnips zihlale isidingo nitrogen. It ludinga ukunceliswa esitshalweni nayo yonke inkathi yokulima. Nitrogen kwandisa amaprotheni e izithelo. Nokho, wonke kufanele abe esilinganisweni, kusukela okweqa nitrogen isiko ikhula izimila isikhathi, ngaphandle ngokugcina izinga nekhwalithi ukuncipha izimpande. Ngo kusaqalwa ukutshala ekukhuleni kwesitshalo kuyadingeka ne phosphorus umsoco. Lokhu amaminerali trace kuvusa ukuthuthukiswa impande, kwandisa ukumelana kwezimo ezingezinhle, anda okuqukethwe ushukela. Sokuzuza yemifino carbohydrate, amaprotheni ascorbic acid kunomthelela potassium okuningi. Ngokuvamile, i-ukukhula evamile nokuthuthuka kwanoma yisiphi isitshalo ezibalulekile izakhi mkhondo ezifana boron, calcium, ithusi, i-magnesium, manganese, nokunye. E. Hhayi okuhlukile, futhi itheniphu.
Lapho zikhula isiko?
Ofanele kakhulu lokhu kwezitshalo kukhona loam sandy noma inhlabathi loamy, peatlands kutshalwa. Nokho, Itheniphu uhamba ezimbi futhi inhlabathi ne-asidi eningi. A grade kokuba flat impande izitshalo kungenziwa etshalwe inhlabathi enhle - ukuze nesishiyagalombili ngamasentimitha.
Labo abathanda indlela yokutshala turnips kuleli zwe, kufanele wazi ukuthi kokumethemba engcono yale isiko kukhona utamatisi, ikhukhamba, ummbila, i-squash, ubhontshisi namazambane, umanyolo eziphilayo lwenziwe ngaphansi kwazo. akufanele agqoke kakhulu acidified isiko ezindaweni, ikakhulukazi emva iklabishi.
Khulisa turnips engadini akunzima kakhulu. Into esemqoka - ukwazi ezinye izici. Kusukela itheniphu kuyinto isiko kom, kungaba kutshalwe izikhathi eziningana isizini eyodwa. Ukuze ukusetshenziswa ehlobo imbewu kufanele kutshalwe entwasahlobo. Nqampuna uzolunga izinsuku ezingamashumi ayisithupha noma ayisikhombisa. Ukuze ekwindla ukuhlwanyelwa kwamukelekile ngoJulayi futhi isitoreji ebusika - ekuqaleni kuka-August.
Lapho spring ayihlwanyelayo phansi kudingeka ukulungiselela kusukela ekwindla. Ngenxa yale njongo kubalulekile ukuqhuba ezijulile ekwindla yokumba futhi wenze umquba kunesidingo. Nge ukufika kwentwasahlobo esizeni ukufika wenziwa ziba ngcono ejulile - kuze kube ngamasentimitha amabili. Khona-ke okusele Umanyolo wangena futhi. Ukuze ehlobo wokutshala umhlaba kufanele amba kumuntu ngamasentimitha kuze kufinyelele amabili ukujula ngaphambi kokuhlwanyela ngobuningi bazithela ngesilinganiso amalitha per imitha square nanhlanu kuya amabili.
Turnips kungenziwa itshalwe phezu flat ehlobo, futhi phezu ridge noma emikhulu entwasahlobo. Mezhduryadovoe ibanga kufanele kube hhayi ngaphansi kuka amathathu ngamasentimitha. Turnips zingatshalwa isitshalo yesibili noma yesithathu ngemva isicelo umquba. Kodwa uma udaba eziphilayo ngaphambi kokutshala awuzibhebhezeli ke zilima ngaphansi humus kumele inikezwe ngesilinganiso emibili kuya kwemithathu amakhilogremu ngamunye imitha square.
Phosphorus noma umanyolo umquba eyenziwe ekwindla kanye presowing ukwelashwa. Nitrogen umquba kudingeka wenze entwasahlobo. Ukweqiwa lesilinganisiwe eziyishumi nanhlanu amagremu urea ngamunye imitha square, esilinganayo sodium chloride, futhi amathathu kuya amane amagremu superphosphate. Uma kudingekile, udinga ukuba afeze liming.
Indlela akhule kusukela imbewu turnips?
Ukutshala impahla kumele athathwe kuphela ngonyaka odlule. Iningi imbewu fresh - kuyisihluthulelo isivuno esihle. Lokhu kutshela iyiphi sezolimo namahlathi, owazi mathupha indlela yokutshala turnips. Ekhaya, ngaphambi kokutshala kufanele ukulungiselela imbewu for kokuhlwanyela. Le nqubo Samandla kuhilela izinto sifakwe emanzini futhi imbewu. Ukuze kube lula futhi ukufana kokuhlwanyela imbewu ukuxuba kangcono esihlabathini noma inhlanganisela superphosphate. On ryadochkam wawubona kufanele enze anemifantu ku ngamasentimitha amabili ezijulile, okuyinto njengoba kufaneleka kufanele moisturize.
Seeding rate turnips elandelayo: cishe igremu elilodwa ngalinye square imitha ngesikhathi ehushule elilodwa noma amabili ngamasentimitha ukujula. Ukutshala impahla zingafakwa emhlabathini namagquma indlela - izingcezu ezimbili noma ezintathu ngesikhathi umgodi, kulandele kwemihlambi.
Ngokuvamile, amahlumela ivele okwesine ngosuku lwesikhombisa emva kokutshala, kuye ngokuthi lokushisa. Ukunakekela yisithombo kuhlanganisa nokususwa esiyisibopho inhlabathi phezulu. Ukuze wenze lokhu, lwalumumethe encane, amasentimitha emithathu kuya kwemihlanu, hoeing. Kuyoze kube phakade kulinywe Kwenziwa kusuka ezintathu kuya kweziyisihlanu irowu kulinywe. Ngaphambi phezu isitshalo iyoba leaf ezintathu kweqiniso Kwenziwa thinning. Ibanga phakathi otshanini ilandelana kumele tisukele nelesithupha amasentimitha, kuyilapho izilimo zasehlobo - engaze ibe yishumi.
Thinning uvame kwenziwe esigabeni amahlamvu ezimbili kweqiniso. It ebangela cishe izinsuku ezingamashumi amabili nanye ngemuva ukuvela. Phakathi izitshalo kufanele kwesokunxele kuze kube ibanga ngamasentimitha amahlanu. Lapho thinning iyaphindwa, khona-ke luyanda eziyishumi. Kanti kowesithathu - ukuba amasentimitha ayishumi nanhlanu. Uma isivuno wathwalwa amagquma indlela, kubalulekile ukuba ushiye kuphela isitshalo eziqine, nokususa bonke abanye.
Labo abazi indlela yokutshala turnips, bathi lokhu isiko Ukuhlakula ukhula kubaluleke kakhulu. Embhedeni Angeke sivumele ukhula, ngoba izimpande zalesi sikhubazekile, izinga layo nokuthi uyenza sinciphile. Ubude kufanele kube ezintathu tillage engajulile isizini. Kulokhu, lesi sitshalo kungcono ukuba kancane Spud. Umhlabathi engadini kufanele kube esemanzi njalo. amanani Jwayelekile ngamunye square imitha kuze kufinyelele amalitha amabili amanzi. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe batusa ukuchelela kushintshane ziba ngcono.
Ngokuvamile, izinyathelo ezinkulu e turnips ezikhulayo ezibhekwa ukuqinisekisa elilungile isitshalo ukuminyana, umswakama ngokwanele, inhlabathi nokuhlanzeka nokulawula Pest, ikakhulukazi nge fly iklabishi crucifer zigcwele.
Harvest futhi isitoreji turnips
Umsuka ukudliwa ehlobo ngokukhetha kufanele ahlanze lapho efinyelela ububanzi 6-8 amasentimitha, futhi ekwindla nasebusika - ngesikhathi ngaphambi frost. Lesi sitshalo kuyadingeka ukuyikhipha zenhlabathi, futhi ngokushesha usike amahlamvu. It kubhekwa isivuno esihle kusukela amakhilogremu per imitha square amabili kuya kwamahlanu. Itheniphu ebusika igcinwe kahle. Amazinga elikhulu for isitoreji 0-1 lamadigri nokushisa kanye nomswakama - 90%. Roots kudingeka uthele esihlabathini ezimanzi noma Turf, nakuba abanye sokuvuna kanye nokugcina e izikhwama zepulasitiki.
Ngo kusaqalwa esakhula ekwakhekeni amaqabunga zokuqala ezimbili kweqiniso, okungukuthi, zingakapheli izinsuku eziyishumi emva ukuqala rostochku ingozi enkulu for isiko kukhona iklabishi fly kanye crucifer zigcwele.
Ukuze kuliwe inkathazo Kunconywa ukuthi esigabeni sokuqala ekwenzeni amalungiselelo ezifana "Bazudin" futhi "Medvetoks". Futhi kusukela zigcwele crucifer usizo okuhle kusho "inhlansi". Uma ungathathi izinyathelo ezifanele, isimo sezulu iyomisa futhi ishisa kakhulu lokhu inkathazo okwaziyo ukubhubhisa ngokuphelele amagciwane. Kunconywe ngokumelene zigcwele crucifer njalo ukugcina indawo elilungile ayihlwanyelayo ezimanzi.
Izinzuzo nezingozi ze-inj-chip-tuning. Ukuhlelwa kwe-Chip: yikuphi, izici, ukubuyekezwa